Fifaninanana tsy nahazoana alalana: hitory ny FMHMC sy ny Kom ary ny MJS | NewsMada
Fifaninanana tsy nahazoana alalana: hitory ny FMHMC sy ny Kom ary ny MJS
Par Taratra sur 11/10/2019
Nanao fanambarana, omaly, ny eo anivon’ny FMHMC (Fédération malgache d’haltérophilie de musculation et culturisme) ny amin’ilay fifaninanana tsy nahazoana alalana kasaina hotanterahina, ny 1 febroary 2020, eo amin’ny taranja bodybuilding. Nanambara ny filoha mpitantana ny federasiona fa mandrara ary manenjika izany ny federasiona ary hametraka fitoriana raha toa ka minia mbola manatanteraka izany ireo mikarakara izany. “Efa nifampiresaka tamin’ny minisitera sy ny Kom ny federasiona ary handray fepetra hentitra amin’io fifaninanana tsy nahazoana alalana io, hosaziana ihany koa izay atleta ao anatin’ny federasiona mandray anjara amin’izany”, araka ny nohamafisin’ny filohan’ny FMHMC, Randriamanarivo Harinelina.
Mahakasika hatrany ity taranja bodybulding ity, hotanterahina ny 26 oktobra ho avy izao etsy amin’ny kolejy Ste famille Mahamasina ny fifaninanana « Gasy body bulders championship amateur ». Fifaninanana misokatra ho an’izay tsy mbola nahazo anaram-boninahitra na nandrombaka laharana telo voalohany, izany hoe, natokana ho an’ ireo bandikely sy hitsongana ireo atleta vao misandratra. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny federasiona, andriamatoa Vernier, tsy hisy intsony ny fihosora-menaka ho an’ireo mpandray anjara satria efa miezaka ny manaraka ny fenitra iraisam-pirenena i Madagasikara.
Ankoatra izay, ny 5 -11 novambra ny hanatanterahana ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, any Korea. Hanana solontena hiatrika izany isika, saingy efa manao sahady antso amin’ny fitondram-panjakana ny mpitantana ny federasiona hanampiana azy ireo.